सासंद पदम गिरी संगको संवाद–विकास गर्न सक्ने नेताको नजरको अभिभारा मलाई दिनुभयो । – MeroJilla.com
सासंद पदम गिरी संगको संवाद–विकास गर्न सक्ने नेताको नजरको अभिभारा मलाई दिनुभयो ।
हाल सालै सम्पन्न प्रतिनिधीसभाको निवार्चनमा विजयी हुनुभएका पर्वतका युवा नेता सांसद पदम गिरीले पाँच वर्ष सम्ममा पर्र्वतको विकास गर्छौ भन्ने कुरा ब्यक्त गरेका छन । उनले यही वर्षमा बिद्धभत्ता पाँच हजार दिने निणर्य गनुभएको छ ।पत्रकार रामकृष्ण लामिछाने संग सासंद पदम गिरीको अन्र्तवार्ता यस्तो छ –
युवा उमेरमा सांसद अनुभव के छ ?
खुशिको अनुभुति हुने कुरा स्वभावीक हुने नै भयो । कक्षा सात देखि मैलो आरोहअवरोह खेप्दै विद्याथी राजनिती छाडेर
पर्वतको पार्टीको राजनीती गरे सफलता र जिम्मेवारी पाएँ स्वभावीक रुपमा खुशि छु ।
निवार्चनपुर्व जनतामा दिएका आस्वासन पुरा गर्न सकनुहुन्छ ?
जनतामा धेरै ठुलो उत्साह छ ।जनताले आशाको नजरमा हेरेका छन । तसर्थ पर्वतको आर्थिक बिकास प्रगतीका निम्ती हामीले काम गर्छौ ।हामीले एैतिहासीक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र योजनावद्ध त।िकाले विकासका काम पुरा गर्छौ ।
सदनमा छिर्दा पर्वतका कस्ता खाले योजनालाई मुख्य प्राथमीकता दिनुहुन्छ ?
राजनितीक उपलवधी हासील भएको छ । देशको आर्थीक उन्नती र प्रगती गर्नुपर्छ कयापल्ट सहित देशका सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्छौं ।
.वाम गठबन्धनको तालमेलअहिले चुडिन लागेको हो ?
कायमै छ । रातारात धेरै कुराहरु मिलाएर जानुपर्छ ।आफैमा एमाले माओवादी दुई ठुला पार्टी सहमती हुदै छन । माओवादी एमालेका अध्यक्षद्धय निरनतर संवाद छलफलमा हुनुहुन्छ । एकता भन्दा साथ हुने कुरा पनि भएन,हामी एक हुन्छौ । हामीलाई पार्टी एकता भएन भनेर बेकुफका प्रचारवाजी गर्ने काम कसैले नगरे हुन्छ । यो मिलन आम जनताले चाहेर भएकाले पार्टी एकता हुन्छ ।
बामगठबन्धन चुनाव जितन कै लागि गरेको हो ?
केन्द्र देखि स्थानीय स्तरमा संवाद र सगठन प्रकिया भएको छ । हामी अध्यक्षहरु संवादमा हुनुहुन्छ ,छिटै एकताको खवर लेख्न पढन पाउनुहुन्छ ।
अहिले भत्ताको राजनिती सुरु गरेको हो ?
कसरी भत्ताको राजनीती हुन्छ ।यो त देउवा सरकारले ग¥यो,जाने बेला पाँचहजार विरामीलाई मासिक पाँच हजारको निणर्य गरेर हुन्छ ? यो पो भत्ताको राजनिती,बिद्ध वा आमालाई एमालेले पाँच हजार दिन्छौ भन्नु के भत्तााको राजनितीक चरित्र होला ?
स्थीर सरकार भएन भने पाँचवर्ष पछि जनताको घरदैलोमा कसरी जाने ?
जे बोलेका छौ ती सवै पुरा गर्र्छा । २०\_३० बर्ष सम्म पुरा नभएका विकास र समिद्धिका सवै कामहरु पुरा गर्छौ । यदी भएन भने अव हाम अवको पाँच वर्ष पछि भोट माग्न जानी ल भन्नुस त ,हामी जान्नौ ।
तँपाईलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने समयमा निकै कठिनाई भयो नी ?
हो यो एउटा प्रकृया त्यो समयमा मलाई चाडौ माथी जाने भयो भने र केही अग्रजहरुले त्यो गर्नुभएकै हो तर म त्यसलाई ठुलो रुपमा लिन्न ।
तँपाई का अध्यक्ष ओलीले छिटै रेल कुदाँउने कुरा गर्नुभयो नी,कहिले कुदछ रेल यहाँ ?
उहाँले भन्नुभएकै छैन । यो पाँच वर्षमा कुुश्मा रेल स्टेशन बन्छ भन्ने सुनेको छैन ।वरु उहाँले गौतम वुद्धको जन्मस्थल सम्म काठमान्डौ देखि रेल लान सबिन्छ भन्नुभयो होला ।
अव पाँच वर्ष पर्वतमा के के गुर्नहुन्छ ?
मलाई पर्वतका एमाले,माओवादीले मात्रै भोट दिएर त्यत्रो १३ हजार मतान्तरले जित्ने थिईन । पर्वतका विकास चहान जनताले मतखान गर्नले मैले जितेको हु । मलाई सवैले विकास गर्न सक्ने नेताको रुपमा हर्नुभएको छ । त्यही भएर मलै स्वच्छ,निश्पक्ष रुपमा विकास गर्छु ।
गत मंसिर २१ गते समपन्न निवार्चनमा मलाई विकास गर्न सक्ने नेताको नजरमा हर्नुभएर जिताउनुभएका सवै पर्वतका जनताको चहना पुरा गर्छु । यो निवार्चनमा सहयाृग गर्ने सवै जनता,राजनितीक दलका कार्यकर्ता,संचारकर्मी,निवार्चन आयोग लगायत सवैलाई धयन्वाद दिन चाहान्छु ।